IThulibha Yongeno Olusheshayo "iPhone": imodeli, incazelo, umsebenzi
Ezweni lanamuhla Kunzima ukucabanga ngaphandle idivayisi siqu electronic ukuthi uhlale ususondele. Omunye abakhiqizi, okungukuthi Apple, sekuyisikhathi eside athumba izinhliziyo zabantu abaningi abanandaba. iPhone amafoni smart, amaphilisi iPad, iPod abadlali - konke lokhu isetshenziswa ezicini ezihlukahlukene zokuphila kwansuku zonke. Yiqiniso, ngeke akwenze ngaphandle ibhethri ukushaja idivayisi, kodwa bambalwa abantu bazi ukuthi kungenziwa, hhayi nje "ukulungisa" kudivayisi kuya ikhebula, kodwa futhi ngenjabulo futhi ngesikhathi esifanayo. Odinga ukukwenza - dock "iPhone". Lesi sihloko sizosisiza ukhuluma ngalokho imibono yabo, yini abakudingayo, futhi kuzovumela ukuba enze ukukhetha zedivayisi ewusizo kakhulu umsebenzisi-friendly for ukushaja Apple smartphone.
Akunakwenzeka ukubala inani eliqondile Smartphones, okuyinto sezisetshenziswa cishe wonke umuntu emhlabeni. Ngokuvamile, izibalo ezibonisa ivolumu ukukhiqizwa Amadivayisi ezithile, ukubethela, noma umane hhayi wachazela. Ngaphezu kwalokho, ngisho sicabangela amadivayisi ithengiswe kusuka esitolo emashalofini, awukwazi ukwazi ulwazi olugcwele. Futhi zonke ngoba kukhona izitolo abathengisa "kumadivayisi grey" nezinye izinto engamboziwe inthanethi.
Ngenxa abacwaningi abazimele, ezifana inkampani GSMA Intelligence, ungabona ukuthi ngo-2014 inani yasebenza futhi wasebenzisa ama-SIM khadi kudlulwe 7.2 bhiliyoni uphawu! Kulula ukucabanga ukuthi (futhi, ngokusho kombiko ezimele) Apple usesikhundleni niche enkulu emzabalazweni yokuncintisana. Empeleni, i-ingxenye abasebenzisi, ohlala eYurophu futhi kwamanye amazwekazi, sekuyisikhathi eside abe ukusetshenziswa komkhuba amadivayisi njenge Apple iThulibha Yongeno Olusheshayo, ekuphileni kwansuku zonke.
Kusuka esiNgisini dock esiteshini Kuzwakala kuyisixazululo "iThulibha Yongeno Olusheshayo" (abantu bebizwa "imbeleko"). umsebenzi wayo lomkhulu waqale ukunikeza abasebenzisi benethuba ekwandiseni yasekuqaleni idivayisi ukusebenza. UMpheme weNsiza yeDeskithophu injalo yasekuqaleni kwadingeka inombolo enkulu nezixhumi yokuxhuma kumadivaysi amaningana futhi kanyekanye ukushaja core.
Ngaphezu kwalokho, kanye ukushaja sekungenzeka ukuba adlulisele multimedia idatha traffic futhi kusukela axhunyiwe. Ukhululekile futhi zisebenza kahle kakhulu. Kodwa isikhathi akusho yima, manje esiteshini docking bangaba wonke izinhlelo umsindo ephathekayo nezinsiza nje enhle, efanelekayo ekhaya ingaphakathi design ngisho nomnikazi eyinkimbinkimbi kakhulu.
Ngakho kungakhathaliseki ukuthi dock okudingekayo ukuze "iPhone"? Lo mbuzo kalula waphendula ongoti kusukela Apple has ukubukeka iPhone 2G. Umkhiqizo wokuqala ifakwe amadivaysi ezifanayo, isusa ibhakuzelisa imizwelo eyakhayo futhi izimpendulo ezivela abalandeli "apula." Lapho inkampani Lake ezisekelwe baqaphela indlela ethandwa esiteshini docking, lona wamuva kwasuswa "iPhones" ejwayelekile futhi kwathengwa ngokwehlukile. Akubuzwa, ukuthi lokhu kwenzeke ngenxa ukoma inzuzo. Kodwa lokhu asikapheli ukuthandwa kumadivayisi, futhi nenombolo amakhasimende wanelisekile liye laqhubeka landa ukukhululwa onobuhle entsha Smartphones, amaphilisi kanye abadlali.
Izinhlobo iziteshi docking
Njalo nomkhiqizi self-ukuhlonipha izesekeli Apple imishini akuyona squeamish, kanye kudalwa eliphezulu amashaja. Empeleni, esiteshini docking "iPhone" - futhi kukhona ishaja, yingakho ezihlukahlukene lezi amadivaysi Sekuyisikhathi eside yaba nkulu kunawo onke imikhawulo ongazicabanga. Njengoba kuchazwe ngenhla, umehluko oyinhloko ukuthi kungenzeka ukushaja, ukudlala umculo nemisebenzi zokuhlobisa. Isikhathi esining impela, kulesi sigaba udumo ekhethekile okunamathiselwe-abanikazi, ezisiza ukulungisa idivayisi emotweni noma iyiphi indawo. Amadivayisi anjalo kufanele kuphela umsebenzi mechanical, futhi azikwazi ukumelana ne nezixhumi wayeqamba. Yingakho umuntu akufanele ukudida semikhumbi nezinamathiselo.
Ngokuvamile nemibhede zenzelwe ukusetshenziswa ne onobuhle ezithile idivayisi. Kodwa kukhona into okuthiwa uMpheme weNsiza yeDeskithophu jikelele. Yiqiniso, ukuthola elilodwa noma kwenye ukuma nge ukushaja bafuna ngokushintsha Apple smartphone, isibonelo, imbeleko Samsung baqhubeka ukwenza umsebenzi walo. Kodwa kulokhu-accessory ubunjalo ke sinqamukile, engesiyo kunenzuzo kakhulu abakhiqizi iziteshi ngokwabo. Lapha futhi ucabanga ukuthi akudingekile, ngoba inzuzo engaphezulu ukuthengisa imikhiqizo eziningana ezahlukene, kodwa nge umehluko isikhathi, kodwa inzalo enkulu. Kodwa ngakolunye uhlangothi, umthengi ungenza ukukhetha esivuna brand ngaphansi owaziwa ezikhiqiza ukuma jikelele. Nokho, le nkulumo iyiqiniso kuphela endabeni noshintsho brand smartphone noma ithebulethi. Kodwa nanku Isobho umenzi efanayo kaningi ukugcina nezixhumi zabo bese ushintshe imbeleko akudingekile. Ngokwesibonelo, isiteshi docking ye-iPhone 5 kalula can onobuhle "yokukhosela" 5S nezintsha SE, futhi kwezinye izimo - ezingaphezu kuka-jikelele 6, 6s, 6 Plus futhi 6s Plus.
Yiqiniso, Abenzi izesekeli, kuhlanganise isiteshi docking, kwaba impela eningi, kangangokuthi esandleni esisodwa kabasebabili abalwa. Nokho abanye kubo okulula kakhulu phakathi izimbangi e wentengo ingxenye.
Ngokwesibonelo, uma ufuna ukwazi kanyekanye ukushaja smartphone yakho futhi ulalele umculo, ngokuvamile kubaneka amagama ezifana Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen, JBL, Bose futhi Philips. Lonke ephathekayo uhlelo audio ukukhiqiza kabusha umsindo wekhwalithi ephezulu kanye injabulo ukulalela izingoma zakho ozithandayo. Uma imbeleko kuyadingeka njengoba nje ukuma enhle, efanelekayo ukushaja elingaphakathi kanyekanye, kuyobe sekuba i-eliphezulu dock "iPhone" kusukela Juice, Nambili South, Belkin, HengeDocks nokunye okunjalo.
nemibhede onophawu Apple
Kulabo abanothando ngokungathí sina ngokushada, coasters "apula" brand kunezindatshana uphawu. Yiqiniso, eminyakeni yamuva ezihlukahlukene kubo kwehliselwe ku cishe zero ngenxa yokuthengisa ongaphakeme. Kodwa uma uvakashela iwebhusayithi yomenzi, ungabona ukuthi umbhangqwana namanje ibophe onobuhle emakethe. Yiqiniso, Apple uMpheme weNsiza yeDeskithophu ngeke ibonise ukusebenza cool, kodwa izokwazi ukuqinisekisa idivayisi okugcwele unimpeded ukushaja. Okwamanje, nemibhede encane ayatholakala nge esakhelwe 8-pin (Lightning ejwayelekile, lisetshenziswa kusukela iPhone 5). Umbala unesicefe - iziteshi ayatholakala ngemibala omnyama nomhlophe.
Kodwa ngaphandle kwalokho, Apple nkampani iqinisekisa kwedivayisi ngokugcwele kanye nokusebenza kakhulu brand eshiwo ngenhla Belkin naMbili South, okuyinto kuqinisekiswa khona website esemthethweni.
iHome iDL46gc Lightning Dokha Station
Kungaba okulungile ukuchaza ukusebenza imbeleko amaningi. Idivayisi lokuqala - esiteshini docking ngezipika, esakhelwe FM-umamukeli, kanye alamu nekhalenda. IHome iDL46gc - kukho omkhulu nje kuphela ukushaja igajethi kwakho okuthandayo kusuka Apple, kodwa futhi ukulalela umculo nalo. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza esiteshini inikeza okwesikhathi 6-cell ukugcina FM imvamisa, uma ngokungazelelwe owayefuna ukulalela izindaba ekuseni noma ujabulele izingoma ezintsha ku wave zakho ozithandayo.
Cradle synchronizes ngokuzenzakalelayo futhi ukushaja iyiphi idivayisi ne esakhelwe Umbani. Kodwa lokhu - akuyona uMpheme weNsiza yeDeskithophu elula. Ukushaja zedivayisi yesibili sezivuma ngenxa yokubakhona ezengeziwe USB isixhumi abayoyenza idivayisi ibhethri isixhumi-Micro USB, USB Type-C kanye nezinye ngekhebula abafanele. Ngokulinganiswa eziphansi (azungeze $ 100) kwenza kule divayisi isikhungo Irreplaceable lokuzijabulisa nesikhathi ukuphathwa kudeskithophu.
Awukwazi ukushiya ngaphandle ukunakwa nedivaysi compact kwi JBL umkhiqizi kusuka e-United States. Cradle ekhanya ifakwe isixhumi lihambisana 3,5-mm stereo Jack TRS. It ekuqaleni okuhleliwe njengoba isiteshi docking iPhone 5, 5c futhi 5S, OnBeat Mini wesilisa kusimangaze abanikazi onobuhle entsha ye-Apple, kanye wokugcina "ahlale" e idivayisi niche.
Uhlelo umsindo yesimanje, ifakwe nokuphathelene imibhobho broadband, kuveza ezijulile izinga umsindo. Lokhu kungaba neze kulindeleke kusuka "umntwana" enjalo. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi esebhokisini labasolwa JBL ifakwe esakhelwe ibhethri, okuvumela ukudlala yomsindo kwimodi ezimele emahoreni angu-8. A kwalokho nice kuba phambi imodi okusindisa, okuyinto kucushiwe ngemva kwemizuzu engu-10 sokungasebenzi. Kufanele kuqashelwe, futhi / Off switch nokulawula amabhathini evolumu, okuyinto ifakwe esiteshini docking. Intengo ngenhlanhla ke impela high - $ 150, okuyinto okunengqondo, ngoba izinga kufanele akhokhe njalo.
Fuz Designs EverDock
Onjiniyela kusukela Fuz Designs akazange uhlupho alalelwayo izinhlelo emaweni, alamu amawashi nezinye Ngokombono wabo, izici engadingekile. Zonke benza - imbeleko ukhululekile kakhulu futhi functional elikuvumela ukuba beka ngokwakho sanoma iyiphi idivayisi, ngisho noma isembozo lufakwa ke. Umklamo ukuma uqinile ngokwanele ngenxa impahla okuyindawo senziwa - aluminium okuqinile.
Kufaka ngedivayisi iza abicah ulwelwesi ekhethekile, esikhundleni ukuthi izintambo ingalungiswa cishe iyiphi isixhumi - I-Micro USB, 30-pin, Umbani, nabanye. Lesi sakamuva ikuvumela ukuba bayakhohlwa ekushintsheni dock isikhathi eside, eqinisweni, ezuza amadivayisi amasha, ungahlala ukusizakala EverDock sokusebenza. version enwetshiwe ne Duo Isiqalo futhi ikuvumela ukuba kanyekanye ukushaja kumadivaysi amaningana ngaphandle ukuthatha isikhala okuningi etafuleni.
IThulibha Yongeno Olusheshayo "iPhone" --accessory ngempela Ukugunda futhi ewusizo. fixing ngamandla endaweni egqamile - ibe yisibambiso smartphone noma ithebulethi baphephile futhi baphilile. Nokho, uma ngaphezu abe ephathekayo uhlelo umsindo, inqobo yokuchitha isizungu ezimnandi. Futhi ekugcineni, iseluleko kancane: hhayi ukonakalisa kudivayisi ibhethri, kufanele siqaphe ukuba elinegazi nabakhiqizi engaziwa. Asikho isidingo skimp lapho uthenga nesisekeli ezinjalo - bese ngonembeza omsulwa, ungakwazi bayakhohlwa iloli ezingalindelekile.
Indlela yokwenza screen shot "Samsung": Umhlahlandlela Beginner sika
Smartphone Jiayu G4S: i Uhlolojikelele, izincazelo, izithombe, izibuyekezo
Smartphone Nokia N95 8GB: izici jikelele, imiyalelo yokusebenzisa
"Sony Iksperiya C3": ukubuyekezwa abanikazi, izici. "Sony Iksperiya C3 Dual": Izibuyekezo
Indlela ukufaka iTunes futhi uqale ukusebenzisa lolu hlelo: khaphi "dummies"
Kangaki ngosuku ukondla nomdlwana: imithetho ukunikezela kanye nezincomo
Kwegazi Okubalulekile: Izimpawu, Ubangela, Ihlahlubo, Ukwelashwa
Ziyini izinhlanzi ezithakazelisayo ze-ratan?
Korali 2 * (Montenegro / Barska Riviera) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Ingwenya inyama: lizwakale limnandi, ikakhulukazi
Ukuhlanza of Bile umntwana: izimbangela, ukwelashwa
Vsevolod Aksyonov: Biography nama-movie
Abandoned emzaneni eduze eMoscow. Ama ifotho, Map
Kemer, Göynük - zokungcebeleka kangcono ebhishi ngamaholidi
Isixubho ku amabhethri: nenqubo yokukhetha. Yini ngokuqinile izixubho bamazinyo batusa
Scorpio: amatshe uphawu zezinkanyezi. Yikuphi itshe evumelana Scorpios (abesifazane futhi amadoda)?
Indlebe Royal: indlela ukupheka?